13 Izizathu Ezikhethekileyo Zokuba Imfundo Ibalulekile
Ngaba uyakholelwa ukuba ukuya esikolweni kunye nokusebenza kwiiprojekthi zekholeji yinkcitho yexesha? Ukuba wenza njalo, kufuneka uphinde uhlolisise ingxoxo yakho kuba imfundo yinkalo ebalulekileyo yokukhula nokuqhubela phambili koluntu. Kweli nqaku, ndiza kukubonisa izizathu zokuba kutheni imfundo ibalulekile.
Ke njengokuba bendiqala ukuthetha, zininzi izizathu zokuba umntu afune ukufundiswa. Okokuqala kukuba abantu abafundileyo banokwenza igalelo elikhulu kwiintsapho zabo kunye noluntu ngeendlela ezahlukeneyo, okubangela uluntu oluzinzile nolunomdla.
Ke kwimigca ezayo, siza kujonga nzulu izizathu zokuba kutheni imfundo ibalulekile.
Masiqalise. Ngeli xesha, nantsi itheyibhile yomxholo apha ngezantsi:
1 Yintoni uMfundo?
2 Ibaluleke ngantoni Imfundo?
3 Izizathu zokuba kutheni iMfundo ibalulekile
3.1 Ukunyuka kwamathuba eNgqesho
3.2 Ukunyuka kwemivuzo
3.3 Ukuphuculwa kweZakhono zokuSombulula iiNgxaki
3.4 Uphucula uQoqosho
3.5 Uthembisa Ubomi Obonwabileyo Nobuzalisekileyo
3.6 Wakha uluntu
3.9 Ukubonelela ngamaThuba alinganayo
3.11 Ufundisa imigaqo yokuziphatha neyokuziphatha
3.12 Ukunyusa izinga lokufunda nokubhala
3.13 Imfundo ikhuthaza ubuchule
4 Izizathu Imfundo iBalulekile: Imibuzo Ebuzwa Rhoqo
6 I ngcebiso
Ngoku ka Wikipedia, imfundo yinkqubo yokuququzelela ukufunda, okanye ukufumana ulwazi, izakhono, iinqobo ezisemgangathweni, ukuziphatha, iinkolelo, imikhwa kunye nophuhliso lomntu.
Imfundo ibangela utshintsho lwendalo noluthatha ixesha elide ekuqiqeni komntu kunye nokukwazi ukufikelela kwisiphumo esifunekayo. Kusenza sikwazi ukuhlalutya iimbono neengcinga zethu size sizilungiselele ukuzivakalisa ngeendlela ezininzi.
Ingoyena thunywashe oyintloko osishukumisela ukuba siqonde phakathi kokulungileyo nokubi ekubeni ngaphandle kwawo, asinakukwenza oko simele sikwenze okanye sifikelele usukelo lwethu.
Ukuyibeka ngokulula, “imfundo lisango lokuqhubela phambili.” Ikwayindlela eya kwikamva lethu, njengoko impumelelo inokufunyanwa kuphela xa abantu benolwazi oluyimfuneko, ubuchule kunye nesimo sengqondo. Ngale ndlela, imfundo ifana nesixhobo esinokuthi ngaso sinxibelelane nabantu abohlukeneyo kwaye sabelane ngezimvo zethu.
Ngaba ujonge izikolo ezinexabiso eliphantsi ukuze uye phesheya? 'Yabona I-15 zeYunivesithi ezingabizi kakhulu eYurophu zaBafundi beZizwe ngezizwe
Ibaluleke ngantoni Imfundo?
Kukho izizathu ezininzi zokuba kutheni imfundo ibalulekile. Kwimigca embalwa elandelayo, siza kujonga ezinye zezizathu zokuba kutheni imfundo ibalulekile. Landela nje ngokusondeleyo.
Izizathu zokuba kutheni iMfundo ibalulekile
Ukunyuka kwamathuba eNgqesho
Ukufumana umsebenzi ohlawula kakuhle kunzima, ingakumbi kula maxesha anzima kwezoqoqosho. Kwisithuba esingenamntu, kungafuneka ukhuphisane namakhulu abanye abagqatswa. Ngaphaya koko, okukhona lisezantsi inqanaba lemfundo, kokukhona abantu befaka izicelo zesi sithuba senqanaba lokungena esihlawula kancinci.
Nangona kunjalo, ukuba unezakhono eziyimfuneko kunye nemvelaphi yemfundo, uya kuba nethuba elingcono lokufumana umsebenzi onomvuzo.
Ngaba uyafuna ukufumana isicwangciso sokugqama phakathi kwesihlwele sabafaki-zicelo? Funda, uzifundise, uphumelele, kwaye ufumane iziqinisekiso ezininzi, izakhono, ulwazi kunye namava kangangoko unako.
Kuninzi nje okuthethiweyo ngokufunda, kwaye ngokunyanisekileyo akunakuze kugxininiswe ngokugqithisileyo. Akukho mntu ufumana ngaphezu kokwazi kwakhe. Abantu abanenqanaba eliphezulu lemfundo kunye noluhlu oluhlukeneyo lwamava basengozini yokukhusela umsebenzi ohlawula kakhulu, weengcali.
Ke, ukuba ufuna ukuphila ubomi obumnandi, kufuneka ufunde kanzima, uchithe ixesha kunye nomzamo wakho wokufumana ulwazi, kwaye ufikelele kwinqanaba eliphezulu lobuchule. Iziqinisekiso zakho kunye namava ayinto eya kukholisa umntu oza kuba ngumqeshi ukuba akuqeshe ngaphezu komnye umviwa.
Ukufunda nzima esikolweni sakho kunye nezifundo kubonisa ukuba awoyiki umsebenzi onzima kwaye unokufezekisa iinjongo zakho. Abaqeshi bakuthatha oku njengenzuzo ebalulekileyo kuba bonke banqwenela umqeshwa onobuchule.
Emva kokuba uphumelele, ungaqala ukukhangela izikhundla eziza kukuvumela ukuba usebenzise oko ukufundileyo ngelixa ukubonelela ngemali eyaneleyo yokuhlangabezana neemfuno zakho.
Funda: Izifundo ezingama-25 eziSimahla eziPrintwayo zeziFundo zeBhayibhile ezinemibuzo kunye neempendulo PDF
Ukuphuculwa kweZakhono zokuSombulula iiNgxaki
Ukuhamba isikolo kunzima, kwaye kuthatha amandla amaninzi ukuze uphumelele. Enye yeenzuzo zemfundo kukuba ikufundisa indlela yokufumana nokuphuhlisa izakhono zokucinga ezibalulekileyo nezinengqiqo, kunye nendlela yokwenza izigqibo ezizimeleyo.
Xa abantwana befikelela ebuntwini obukhulu, bajamelana neengxaki ezininzi ezinjengokufumana umsebenzi, ukondla iintsapho zabo, njalo njalo. Nangona kunjalo, ukuba umntu uchithe iminyaka ezifundisa, kufuneka akwazi ukwenza izigqibo ezifanelekileyo kwezi ngxaki zininzi.
Ke imfundo ikunceda ukuba ufunde indlela yobuchule nangobuchule yokusingatha amaxesha anzima kakhulu ebomini.
Abantu abaneziqinisekiso eziqinileyo zemfundo kunye nezemfundo basengozini yokufumana imisebenzi ehlawula kakuhle. Okukhona bephezulu uqeqesho kunye nempumelelo yabo, kokukhona baya kuba namathuba emisebenzi amaninzi.
Abantu abazalwe behlwempuzekile kodwa bazifundise ngokufanelekileyo banethuba eliphezulu lokuguqula ubomi babo kwaye ngaloo ndlela bafake isandla ekunciphiseni izinga lentlupheko kuluntu.
Imfundo inceda amazwe ukuba achume kwezoqoqosho kuba imalunga nokufumana ulwazi nokukwazi ukulusebenzisa ngengqiqo kubomi bethu ngelixa siphucula nobomi babanye.
Uthembisa Ubomi Obonwabileyo Nobuzalisekileyo
Imfundo ngokwesiko iqinisekise intlonipho yoluntu. Ukuze baphumelele baze baneliseke, abantu bafanele bazifundise baze bafumane umsebenzi ohlawula kakuhle ukuze baphile ubomi obutofotofo. Iphucula isidima somntu kwaye inyuse amathuba okuba umntu anyukele phezulu kwinqanaba lomsebenzi ngokukhawuleza nangokusebenza nzima.
Ngenxa yoko, imfundo inika abantu indlela yezemali ukuze baphile ubomi obuzinzileyo—abantu banokukwazi ukuzithengela indlu okanye indawo yokuhlala, beqinisekisa ulonwabo nempumelelo yabantwana babo. Ukongeza, ukukwazi ukuba nekhaya lakho kunika uzinzo kwaye konyusa ukuzithemba.
Ngaba kukho naziphi na iingenelo zentlalo ngemfundo? Ewe zinjalo.
Abantu abafundileyo bayakuqonda ukubaluleka kokuhlala kwindawo ezinzileyo. Badla ngokuthatha inxaxheba kwiiprojekthi ezinceda kungekuphela nje ummandla wabo kodwa noluntu ngokubanzi.
Imfundo ibaluleke kakhulu kwihlabathi lanamhlanje. Ukuze umntu akwazi ukuba negalelo kwibutho labantu bale mihla, ufanele afunde ngenkcubeko, imbali, nezinye izifundo ezibalulekileyo. Imfundo ibumba abantu ukuba babe ziinkokeli kungekuphela nje ngokubanika ulwazi malunga nezifundo (zasekholejini), kodwa nokubafundisa indlela yokukhokela ngeemvakalelo neenkolelo eziyinyani.
Abantu abafundileyo banokukhawuleza babone umahluko phakathi kokulungileyo nokubi, ngenxa yoko imfundo inceda ekunciphiseni ulwaphulo-mthetho. Imfundo inceda ukudala imeko-bume ephilileyo nepholileyo.
Funda kwakhona: IiYunivesithi eziBonelela ngeeScholarship eziGcweleyo zaBafundi beZizwe ngeZizwe
Ukunxulumana nabantu kunye nemibutho kwihlabathi liphela kwenziwa lula yimfundo yedijithali. Imida ayisekho. Ukukwazi ukusebenzisana kunye nokwabelana ngezimvo nabantu abavela kwamanye amazwe kunye neenkcubeko kwandisa iimbono zethu kwaye kusivumela ukuba siqonde ngcono kwaye sihloniphane.
Ukubonelela ngamaThuba alinganayo
Imfundo ibisoloko ibaluleke kakhulu eluntwini, kungakhathaliseki ukuba luphi uhlanga, uhlanga, isini, okanye unqulo. Abantu abafumene imfundo babonwa njengabalinganayo ngokusekelwe kulwazi kunye nezakhono zabo.
Ngaphezu koko, abantu abafundileyo banengqondo ephangaleleyo yaye bayakwazi ukuphulaphula nokwamkela iimbono zabanye abantu, kungakhathaliseki ukuba bahluke kangakanani na. Imfundo inika ithuba lokuphila ngokuzimeleyo kwaye ke ukhululeke. Liyindawo yethu ekhuselekileyo kwiinkqwithela zemali nakwizigqibo ezimbi.
Imfundo ibonelela ngezixhobo ezininzi kunye neendlela zokuqonda kunye nokusombulula ubunzima obuphambi kwethu. Okubaluleke ngakumbi kukuba, imfundo isenza sibe namandla engqondweni esiwafunayo ukuze senze izigqibo ezisengqiqweni size sisabele ngokukhawuleza xa kuyimfuneko.
Ufundisa imigaqo yokuziphatha neyokuziphatha
Imfundo ikhuthaza ukulingana kwamathuba kunye nokuziphatha okuhle. Ifundisa abantu indlela yokuphila ngokusesikweni nangenkathalo eluntwini.
Injongo yemfundo, ingakhathaliseki inkqubo yentlalo, imele ibe kukuvuselela umoya wokucinga nokudlulisela ulwazi.
Ukunyusa izinga lokufunda nokubhala
Izinga lelizwe lokufunda nokubhala liyachatshazelwa nayimfundo. Ukufunda nokubhala kubhekisela kubuchule bomntu bokufunda nokubhala. Ukufunda nokubhala kubalulekile kubantu abadala njengasebantwaneni. Okukhona liphezulu izinga lokufunda nokubhala, kokukhona liyakhula ukukhula kwelizwe.
Imfundo ikhuthaza ubuchule
Ukuyila kwabafundi kukwakhuthazwa yimfundo. Imfundo ivumela abafundi ukuba basebenzise izakhono zabo ngeendlela ezintsha kunye nezobuchule, okubavumela ukuba babe nobuchwephesha obungakumbi. Ubuchule babafundi bubanika ithuba lokuphumeza iinjongo zabo.
Izizathu Imfundo iBalulekile: Imibuzo Ebuzwa Rhoqo
Zingaphi iindidi zemfundo ezikhoyo?
Zintathu iindidi eziphambili zemfundo; Ngokusesikweni, ngokungekho sikweni, kwaye nangokungekho sikweni.
Imfundo ilenza njani ilizwe libe yindawo engcono?
Imfundo inokukhuthaza ukukhula koqoqosho ngokuthe ngqo, ngokunyusa iinguqulelo ezintsha, imveliso, kunye nabasebenzi. Kwaye imfundo nayo inembali yokukhuthaza utshintsho oluhle lwentlalo, ngokukhuthaza izinto ezifana nokuthatha inxaxheba kwezopolitiko, ukulingana kwezentlalo, kunye nokuzinza kwendalo.
Kutheni imfundo iyimfuneko kuye wonke umntwana?
Abantwana baboniswa iikhonsepthi ezintsha ngemfundo, ebancedisayo ekumiseleni indlela yekhondo lomsebenzi. Imfundo ikwanceda abantwana ukuba baphuhlise ubuntu babo bonke kwaye babe nolwazi ngakumbi ngemekobume yabo. Imfundo inceda ekupheliseni izenzo zoluntu ezifana nokuqeshwa kwabantwana ngelixa ikwakhulisa uqoqosho lwelizwe kunye nempumelelo.
Ikhaya lethu liziko lokuqala lemfundo apho siqala khona imfundo yethu. Nangona imfundo yasesikolweni inikela ulwazi oluthile oluphathelele izifundo, ukuqonda ngokwenzululwazi, okanye ezinye izakhono, sifunda indlela yokusebenzisana nabanye kunye nemilinganiselo yokuziphatha ekhaya.
Imfundo kuphela kwendlela yokufumana impumelelo ebomini bomntu. Yinkqubo eqhubekayo nekhuselekileyo yokufikelela usukelo olungancedi nje ekufumaneni ulwazi kodwa nasekufumaneni impumelelo ebomini.
Nantoni na esiyifundayo ngenkqubo efanelekileyo ihlala kuthi kubo bonke ubomi bethu kwaye idluliselwe kwisizukulwana esilandelayo. Imfundo esemgangathweni inokusizuzisa phantse kuzo zonke iinkalo zobomi bethu ize isalathise kwikhondo elifanelekileyo.
Siyathemba ukuba ungathemba ngaphandle kwamathandabuzo ukuba imfundo ixabiseke ngokwenene. Uzibonile izizathu zokuba kutheni imfundo ibalulekile kwaye sinethemba lokuba iya kukunceda wenze ukhetho olunolwazi.
Iikholeji zoLuntu eziGqibeleleyo eCanada
Ezona ziGqweso ziBalaseleyo zeBasidanga eCanada
Ezona zifundo ziBalaseleyo zePostgraduate eCanada
Izona zikolo ziBalaseleyo eCanada ngaphandle kwe-IELTS
Iikhosi ze-Intanethi ezisimahla zeKhanada eCanada
Post Previous:Izikolo eziBalaseleyo zoBunjineli ze5 eCanada ngeeScholarship
Okulandelayo Post:I-Diploma yeSikolo samaBanga aPhakamileyo esi-15 esiVunyelweyo kwi-Intanethi